Fedora Kinoite, anotevera Spin ayo anosvika naFedora 35 | Linux Vakapindwa muropa
Vashandisi veLinux vane matani emamiriro ekuratidzira aunosarudza kubva. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeyeGNOME, pamwe nekuti ndiyo inoshandiswa neakakura edhisheni yezvikamu zviviri zvakakura seUbuntu neFedora, asi mune mbiri zviitiko isu tine mamwe manakiro. Nezve iyo yekupedzisira, nhau nyowani yakaburitswa nhasi, Kukadzi 17: Kinoite Fedora, itsva isingachinjiki spin iyo inosvika ne v35 yeanoshanda system.
Sezvatinoverenga mu Chirongwa Wiki, Kinoite iri zvinoenderana nehunyanzvi hwakafanana hunoshandiswa naFedora Silverblue, asi zvazvichasanganisira ichave iyo KDE desktop. Kunyanya, ivo vanotaura kuti ivo vachashandisa Plasma, uye ini ndinotaura pane izvi nekuti Plasma ndiyo graphical nharaunda uye desktop yaizopedzwa zvakare nemamwe ma KDE maapplication ayo, pamwe, ivo vanozopedzisira vachishandisa muKinoite.
Fedora Kinoite anoshandisa tekinoroji imwechete seSilverblue
Fedora Kinoite isingachinjiki desktop inoshanda sisitimu ine iyo KDE Plasma desktop. Iyo yakavakirwa pane imwecheteyo matekinoroji seFedora Silverblue (rpm-ostree, Flatpak, podman). Fedora Kinoite ndeye Fedora KDE Spin izvo Fedora Silverblue iri kuFedora Workstation.
Vakafunga kushandisa Kinoite nekuti ingangoita ese KDE software inotanga naK, nekuti iri zvakare bhuruu maminera anogona kureva "sirivheri" uye "bhuruu" sezvikamu zve silverblue uye ruvara rweFedora logo uye kuti izwi iri rinorevawo kuti "kune muti" muchiJapan, zvinoreva "muti" we "ostree".
Kinoite chichava chaicho nekusunungurwa kweiyo inoshanda system v35, iyo yakarongerwa Gumiguru inotevera. Parizvino, kambani iri kuvandudza Fedora 34, yakarongerwa pakati paApril, uye ine vhezheni yayo huru inoshandisa GNOME 40 uye GTK 4.0. Iyo KDE Edition kana Spin inowanikwawo, asi Kinoite iri yepamutemo, inonakidza uye ine chinzvimbo chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Fedora Kinoite, anotevera Spin uyo anosvika naFedora 35 uye ichave yakavakirwa paSilverblue
Ndiri kufara kushandisa Fedora Silverblue. Ini handina kumomesa komputa yangu kwemwedzi nekuti zviri nyore kudzokera kumashure kana kumberi pane system system. Chromebook, android uye MacOS inoshandisa uzivi hwechinhu chisingachinjiki uye chisingaputsike chakatarisana nemushandisi wekupedzisira uye zviripachena nemirairo yakapusa senge rpm-ostree yekuisa iwe unogona kugadzirisa iwo wepasi mufananidzo.